Timoteo Nhoma a Edi Kan 4:1-16
Ɔbɔɔ wɔn kɔkɔ wɔ ahonhommɔne ho (1-5)
Nea ɛma yɛyɛ Kristo asomfo pa (6-10)
Apɔwmuteɛteɛ ne onyamesom pa (8)
Ma w’ani nku wo nkyerɛkyerɛ ho (11-16)
4 Nanso asɛm a efi honhom mu no* ka no pefee sɛ, mmere bi bɛba a ebinom bɛtwe wɔn ho afi gyidi no ho akodi nnaadaasɛm a efi honhom mu*+ ne ahonhommɔne* nkyerɛkyerɛ akyi. 2 Nea ɛbɛma aba saa ne sɛ wobetie nyaatwomfo a wɔka atosɛm.+ Wɔn na wɔn ahonim* awu; ɛte sɛ etwã a dade ahye obi ama abɛda ne ho. 3 Wɔbara aware,+ na nnuan a Onyankopɔn bɔe sɛ wɔn a wɔwɔ gyidi+ na wɔahu nokware no yiye mfa aseda nni no,+ wɔka kyerɛ nkurɔfo sɛ ɛnsɛ sɛ wodi.+ 4 Nanso nea ɛwom ne sɛ, Onyankopɔn abɔde nyinaa ye,+ na sɛ obi da ase wɔ ho a, ɛnsɛ sɛ ɔpo biribiara,+ 5 efisɛ Onyankopɔn asɛm ne mpae a wɔbɔ gu so no ma ɛho tew. 6 Sɛ wode afotusɛm yi ma anuanom no a, wobɛyɛ Kristo Yesu somfo pa, obi a wɔde nsɛm a egyina gyidi ne nkyerɛkyerɛ pa so atete no;* ɛno na woadi akyi pɛpɛɛpɛ no.+ 7 Atosɛm a etia nneɛma kronkron, te sɛ nea mmerewa ka no, bɔ gu.+ Mmom, fa onyamesom pa si w’ani so na fa tete wo ho. 8 Efisɛ apɔwmuteɛteɛ so wɔ mfaso kakra de, nanso onyamesom pa so wɔ mfaso ade nyinaa mu, efisɛ ɛboa yɛn wɔ asetena mu nnɛ, na ɛbɛboa yɛn wɔ nkwa a ɛbɛba daakye no+ nso mu. 9 Saa asɛm no yɛ nokware, na ɛsɛ sɛ yegye tom paa. 10 Eyi nti na yɛyɛ adwumaden na yɛyere yɛn ho+ no, efisɛ yɛde yɛn ani ato Onyankopɔn teasefo no so. Ɔno na ɔyɛ nnipa ahorow nyinaa+ Agyenkwa,+ ne titiriw no, anokwafo. 11 Kɔ so fa ahyɛde ahorow yi ma na fa kyerɛkyerɛ. 12 Mma obiara mmmu aberante a woyɛ no animtiaa* da. Mmom no, yɛ nhwɛso ma anokwafo no wɔ ɔkasa, abrabɔ, ɔdɔ, gyidi, ne ahotew mu. 13 Ma w’ani nku baguam akenkan,+ afotu,* ne nkyerɛkyerɛ ho kosi sɛ mɛba. 14 Mmu w’ani ngu akyɛde a ɛwɔ wo mu no so, nea wɔnam nkɔmhyɛ so ma wunyae, bere a mpanyimfo kuw no de wɔn nsa guu wo so no.+ 15 Dwinnwen eyinom ho; fa w’adwene nyinaa si so, na ama nnipa nyinaa ahu wo nkɔso. 16 Hwɛ wo ho so yiye bere nyinaa, na ma w’ani nku wo nkyerɛkyerɛ+ ho daa. Yere wo ho yɛ eyinom, na sɛ woyɛ saa a, wubegye wo ho ne wɔn a wotie wo no nkwa.+
^ Nt., “honhom no.”
^ Nt., “nnaadaa ahonhom.”
^ Anaa “ayɛn no.”
^ Anaa “abomfiaa.”
^ Anaa “nkuranhyɛ.”